नेकपाले आव्हान गरेको नेपाल बन्दमा माओवादी केन्द्रको पनि समर्थन ! — Sanchar Kendra
नेकपाले आव्हान गरेको नेपाल बन्दमा माओवादी केन्द्रको पनि समर्थन !
काठमाडौं, २२ बैसाख ।
प्रचण्ड गठबन्धनको केपी ओली सरकार चरम फासिवादी बन्दै गएको भन्दै त्यसको विरोधमा नेकपाले आज २२ गते नेपाल बन्द आवहान गरेको छ । देशभर बन्दको प्रभाव बिहानैदेखि परेको छ ।
बन्दका कारण राजधानी काठमाडौंसहित विराटनगर, हेटौंडा, नेपालगंज, धनगढीसहित ठूला शहर सुनसान छन् । विहानैबाट खुल्ने पसलहरु बन्दै नै छन् भने सडकमा एम्बुलेन्‍स, तरकारी, दूधका गाडी मात्रै देखिएका छन् ।
काठमाडौंबाट देशका विभिन्‍न स्थानमा छुट्‍ने लामो दुरीका सवारी यातायातका साधनहरु पनि बन्द नै छन् । बस पार्कमा सुनसान छन् ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका दर्जनौँ नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने, बेपत्ता पार्ने र झूटा मुद्दा लगाउने, भारतीय ज्यादतीबिरुद्ध मौन समर्थन गर्ने लगाएतका काम सरकारले गरेपछि नेकपा आन्दोलनमा उत्रिएको हो । नेकपाले आफ्ना १२ जना नेता–कार्यकर्तालाई सरकारले बेपत्ता पारेकाले वर्तमान सरकारलाई फासिस्ट र निरङ्कुश बन्दै गएको बताएको छ ।
सरकारको उक्त दमन, धरपकड र फासिस्ट शैलीको विरोधमा आज नेपाल बन्दको घोषणा गरिएको हो।
यसैबीच पुनर्गठित माओवादी केन्द्रका संयोजक गोपाल किराँतीले वैशाख २२ गतेका लागि नेकपाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दलाई समर्थन गरेका छन् । मङ्गलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता किराँतीले सरकार र नेकपाबीच वार्ता हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् ।
‘नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) महान् जनयुद्धद्वारा स्थापित क्रान्तिका मुद्दाहरू कार्यान्वयन गर्न सङ्घर्षरत राजनीतिक सङ्गठन हो । तर चारु मजुमदारको रगत पिउने ज्योति वसुको भूत सवार खड्ग ओली सरकारले नेकपामाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाएर त्यसका नेताहरूविरुद्ध मुद्दा हाल्ने, गिरफ्तार गर्ने, बेपत्ता पार्नेजस्ता जघन्य दमन गरिरहेको छ ।’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, -‘माओवादी कम्युनिस्ट मास्ने दलाल पुँजीवादी राज्य दमनविरुद्ध नेकपाद्वारा आयोजित ‘नेपाल बन्द कार्यक्रम’ लाई नीतिगत समर्थन गर्दै नेपाल सरकार–नेकपा वार्ताका लागि आह्वान गर्छ ।’